Madaxweyne Uhuru Kenyatta Oo Ku Gacan Seyray Go’aanka Maxkamadda ICJ -
HomeWararkaMadaxweyne Uhuru Kenyatta Oo Ku Gacan Seyray Go’aanka Maxkamadda ICJ
Madaxweyne Uhuru Kenyatta Oo Ku Gacan Seyray Go’aanka Maxkamadda ICJ
Qoraalka oo ka kooban afar bog oo la soo saaray fiidnimadii Talaadada, ayuu Madaxweyne Kenyatta ku dhaleeceeyay go’aanka, isagoo si adag u sheegay in Kenya ay gebi ahaanba diideyso oo aysan aqoonsan doonin natiijada maxkamadda.
“Bilowgii, Kenya waxay rabtaa inay muujiso inay diidday gebi ahaanba mana aqoonsana natiijada go’aanka. Go’aanku wuxuu ka kooban yahay sii jiritaanka dacwadda ICJ waxayna keenaysaa su’aal aasaasi ah oo ku saabsan ixtiraamka madaxbannaanida iyo oggolaanshaha Dawladaha ee hannaanka garsoorka caalamiga ah, ”ayuu yiri Kenyatta.
“Maxkamadaha caalamiga ahi waxay awood u leeyihiin oo kaliya inta ay le’eg tahay oggolaanshaha Dawladdu.”ayuu sii raaciya
Madaxa dowladda ayaa intaas ku daray in go’aanka maxkamadda adduunka uu xumayn doono xiriirka Kenya iyo Soomaaliya.
“Go’aankani waa, duruufaha jira, ciyaar eber ah, taas oo xumayn doonta xiriirka labada dal. Waxa kale oo ay beddeli doontaa guulaha bulsho, siyaasadeed iyo dhaqaale; waxaana laga yaabaa inay sii xumayso xaaladda nabadda iyo amniga ee Gobolka Geeska Afrika ee jilicsan, ”ayaa lagu yiri bayaanka.
Kenya ayaa iska indho tireysa xukun maxkamadeed oo ku saabsan muranka soohdinta badda ee kala dhexeeya Soomaaliya
Wuxuu sheegay in Kenya ay arrinta ku daba -mari doonto hay’adaha Midowga Afrika sida Barnaamijka Xuduudaha Midowga Afrika iyo Nabadgelyadeeda iyo Ammaankeeda, dhismaheeda, marka lagu daro qaban qaabada kale ee labada dhinac.
“Walaalahayga reer Kenya, markii aan noqday Madaxweynaha 9 -kii Abriil 2013, waxaan ku dhaartay inaan ilaalinayo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Kenya. Uma jeedo inaan tirtiro dhaarteyda weyn, waxaan samayn doonaa wax kasta oo suurtogal ah anigoo ah Madaxweyne iyo Taliyaha Guud, si aan u ilaaliyo dhulka Jamhuuriyaddeena weyn isla markaana aan ugu dardaarmo mid la mid ah, mid dhawrsan oo aan tiro lahayn, Madaxweynaha soo socda marka waqtigaygu dhammaado wax ka yar hal sano, ” ayuu yiri.
Maxkamadda ugu sareysa ee Qaramada Midoobey ayaa Talaadadii si weyn ugu xukuntay Soomaaliya dacwadii ay kala dhaxeysay Kenya, iyadoo xuduud bad ka sameysay qeyb ka mid ah Badweynta Hindiya oo la rumeysan yahay inay hodan ku tahay shidaalka iyo gaaska.
Xuduud cusub oo ay samaysay Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladdu waxay inta badan raacday xariiq ay soo jeedisay Soomaaliya, iyada oo loo aaneynayo dhowr goobood oo saliidda badda ah oo ay Kenya sheegatay.